माहाबिर पुनले गण्डकी प्रदेशलाई दिए एम्बुलेन्स…हेर्नुहोस । उहाँलाई उच्च सम्मान ! – yuwa Awaj
मंग्सिर १२, २०७७ शुक्रबार 3
पोखरा : लौ सुन्नु होस् आज गण्डकी प्रदेशलाई हस्ता’न्तरण गरेको “को’रोनाको स्वाबब संकलन गर्ने गाडी” को बारेमा । सो गाडी आज गण्डकी प्रदेशको मुख्य मन्त्रीज्युले बुझेर पश्चिमान्चल स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई हस्ता’न्तरण गर्नु भएको छ ।
सो गाडी वडा वडा र गाउँ गाउँ गएर स्वाब सं’कलन गर्ने योजना छ । कोरोनाको महामारी सकिए पछि सो गाडी राष्ट्रिय आ’विष्कार के’न्द्रलाई फिर्ता गर्नेछन । अरु प्रदेशहरुलाई पनि यस्तै सहयोग चाहिएको छ भने सम्पर्क गर्नु होला ।
रा’ष्ट्रिय आ’विष्कार के’न्द्रले नयाँ गाडी किनेर प्रदान गरेको होइन । धेरै जना नयाँ गाडी नै किनेर दिएको हो कि भनेर झुक्किनु भयो होला । राष्ट्रिय आ’विष्कार के’न्द्रको नयाँ गाडी किनेर दिने क्षमता पनि ता छैन । सो गाडी “जन स्वास्थ्य सरोकार ट्रष्ट” द्वा’रा संचालित काठमाडौँ मोडेल अस्पताल र किर्तिपुर अस्पतालले एम्बुले’न्सको रुपमा चलाएको पुरानो गाडी हो ।
सो ट्र’ष्टले नयाँ एम्बु’लेन्स किने पछि थन्किएको सो गाडीलाई रा’ष्ट्रिय आवि’ष्कार के’न्द्र लाई प्रदान गरेको थियो । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा सो गाडी ल्याएर करिब २ लाख रुपैंया जति खर्च गरि त्यसको ईन्जिन नै खोलेर पू’र्ण रुपमा मर्मत गरिएको हो । अनि त्यसलाई स्वा’ब संकलन गर्ने गाडीमा परिणत गरिएको हो ।
त्यस्तो स्वाब संकलन गर्ने केहि गाडीहरु केहि महिना अगाढी NAST ले बनाएर हस्ता’न्तरण गरेको थियो ।त्यहि भाईहरु रा’ष्ट्रिय आ’विष्कार के’न्द्रमा आएर सो गाडीमा स्वा’ब संकलन गर्ने सिस्ट’महरु जोडेका हुन् ।
यो गाडी भित्रको हावाको चाप बाहिरको भन्दा बढी हुने गरेर मिलाईएको छ जसले गर्दा भित्र बस्नेलाई को’रोनाको भाइ’रस सर्ने चा’न्स एकदमै कम हुन्छ । त्यसमा कसरी काम हुन्छ भनेर एउटा भिडियो तल राखिएको छ सो पनि हेर्नु होला ।
यस्ता पुराना गाडीहरु हजारौंको संख्यामा नेपाल भरि नै छन । तिनीहरुलाई मर्मत सम्भार गरेर अथवा ब्या’ट्री द्वारा चल्ने गाडीमा परि’णत गरेर पनि अझ धेरै समय सम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी सबै नेपालीहरुलाई गराउंदछु ।पुनले लेखेका छन ।
Prevदक्षिण एशियामै नमूना प्रविधिबाट १ अर्ब ६६ करोडमा बन्न लागेकाे केबलकार परियोजनामा दुई बैंककाे साथ…हेर्नुहोस् ।
Nextलकडाउनले गर्दा भो’काएका मानिसहरूलाई हवाई विमान बाट घरघरमा खाना पु’र्‍याउँदि यी पाइलट…हेर्नुहोस् ।
हार्दिक बधाई ! समाजसेवी ईशा गुरुङ’को अपिलमा सियोनालाई ६,१५,३८१ रुपैंया सहयोग…उहाँलाई उच्च सम्मान ।